“XUKUUMADU WAA KU MEEL-GAAR AWOODNA UMA LAHA IN AY IIBISO HANTIDA ” XILDHIBAN G/WAKIILADA | Toggaherer's Weblog
Tiro Xildhibaanno ah oo ka tirsan Golaha Wakiillada ayaa ka hadlay, isla markaana wax laga xumaado ku tilmaamay Rasaas ay Ciidamada Amnigu ku rideen Ardayda Dugsiga Hoose/dhexe ee Sh. Bashiir oo dorraad Mudaharaad ay kaga cabanayaan Dugsigooda oo la sheegay in qayb ka mid ah la iibiyey ku maray Jidka badhtamaha Magaalada Hargeysa. Waxaanay ugu baaqeen Ganacsatada laga iibiyey Dhulka Dawladda qaarkood in ay ka laabtaan. Iyaga oo sheegay in ay u yeedhi doonaan Wasiiro Xukuumadda ka tirsan.
Mudanayaashan oo shalay si wada-jir ah Shir-jaraa’id ugu qabtay Xarunta Golaha Wakiillada ee Magaalada Hargeysa, ayaa Xukuumadda ku dhaliilay in ay Boob kula kaceen Hantida Dawladda, isla markaana waxay sheegeen in ay ogaadeen in Xukuumaddu iibisay Dhul ka mid ah Dugsiga Sheekh Bashiir ee Magaalada Hargeysa. “Aad baanu uga xunnahay Caruurta Rasaasta lagu furay. Waxaanu soo ogaanayin qayb Dugsiga ka mid ah oo Guryo ka mid ah ay Macallimiintu galaan la iibinayo..Dhul-boobkan ha la joojiyo, waxaad mooddaa in meel lagu degdegayo, halka Wasiir Cawil leeyahay xaasha’ dhul maanu iibin, Wasiir kalena leeyahay waanu iibinay.” Sidaa waxa yidhi Xil. Axmed Maxamed Diiriye (Nacnac) oo ka mid ahaa Xildhibaannadii Shirkaa-jaraa’id qabtay.
Sidoo kale, Xil. Ibraahim Jaamac (Reyte) oo xubin ka ahaa Mudanayaashaa shalay ka hadlay dhacdadaas, ayaa sheegay in inkasta oo ay Xukuumaddu xaq u leedahay in ay iibiso hantida Dawladda, haddana aanay u marin sifo sharci ah. Waxaanu Dhulkan la iibiyay ku tilmaamay mid ay Wasiiro gaar ahi iibinayaan. “Hantida Dawladda markay baahidu timaaddo waa la iibin karaa, waxaana jira hab loo maro. Balse, baahidaa dadka looma soo bandhigin. Golaha Wasiiradana dibedda ugamay soo bixin in laga dooday oo laysla gartay (iibinta Dhulka), Wasiiro gaar ah ayaa iibinaya.” Ayuu yidhi Xil. Rayte, waxaanu intaa ku daray oo uu yidhi, “Waxa muuqata in dad gaar ah oo qaarkood aanay Muwaadiniin ahayn hoos looga iibiyay, waana xaaraan..Waxaana la filayaa in Jeebab gaar ah oo Cawil Wakiil inooga yahay ay ku dhacdo.” Xildhibaan Rayte wuxuu uu baaq u jeediyay Ganacsatada iibsatay Dhulka la sheegay in Xukuumaddu iibisay. “Nin kasta oo Lacagtiisa geliya oo sharci-darro ku iibsada Hantida Dawladda, waa lagaga daba imanayaa. Haddii ay si sharci-darro ah Lacagtooda u geliyaan si sharci ah ayaa loogaga daba iman doonaa oo hantidan ay iibsadeen dadka oo dhan baa leh…Ninkii Lacagtiisa ku khamaaraya isagay jirtaa ee waxaan Ganacsatada kula dardaarmayaa in aanay Lacagtooda gelinin.”
Xildhibaan Maxamed Cumar Jiir oo Mudanayaasha halkaa ka hadlay isna ka mid ahaa, ayaa Xukuumadda kula dardaarmay in aanay ku sifoobin mid aan dan ka lahayn dalka iyo dadka. “Iska daa in Shaqaalaha Dawladda wax loogu draee, waxa laga burburiyay oo la iibiyay Guryihii ay ku jireen, iyadoo loo cuskanayo sabab aan Miisaan lahayn oo qurux iyo wax ah..Dawladdu haddii ay dadka dawlad u tahay, waxaan odhan lahaa, danta dalka ha ka shaqayso..yaanay inaga noqon Gabadhii Faransiiska ahayd ee aragtay dadka Mudaharaadaya ee markii ay waydiisay waxay ka mudaharaadayaan ee lagu yidhi, Roodhi bay waayeen tidhi, maxay Keeg u cuni waayeen. Waxay Cunaan ma hayno, qurux baana la doonayaa. Waxaan leeyahay Xukuumadda isku noqda oo Sharciga ku dhaqma.
Sidoo kale Xildhibaannadii Shirkaa-Jaraa’id ka hadlay waxa ka mid ahaa oo kale Xil. Maxamed Xuseen X. Ciise, ayaa Xukuumadda ugu baaqay in iibinta Hantida Dawladda ay u marto sifo sharci ah. Waxaanu sheegay in Xukuumadda M/weyne Rayaale aanay awood u lahayn in ay iibiso Dhulka Dawladda, isla markaana uu waqtigeedii dhammaaday oo ay ku-meel-gaadh tahay. “Waqtigeedii wuu dhammaaday oo waa loo kordhiyay, waana ku-meel-gaadh. Sidaa darteed, Sharciyan awood uma laha in ay iibiso. Aniga iyo Xil. Obsiiye waanu tagnay Dugsiga, waa laba Guri oo Dugsiga ah, dadkii waa laga saaray waana la iibiyay.” Ayuu yidhi Xil. Maxamed Xuseen, waxaanu intaa ku daray oo uu yidhi, “Dusha markaad ka eegto lama iibin Dugsiga. Balse, markaad eegto waa la iibiyay oo guriga ku qabsan Dugsiga ee hantida Dugsiga ah ayaa la iibiyay..Xukuumaddu inay ka xishooto ayay ahayd, waayo, Caruurtii 9-jirka ahayd Xukuumaddu Rasaas bay kala xishoon wayday. Ballan baanu qaadaynaa in aanu ka hawlgalno, Baayacmushtariga ka qaybqaadanaya iibkanna waanu la hadlaynaa. Waxaananu u sheegaynaa in ay xaaraan iibsanayaan..Runtii boob hantida lagu hayo weeye, waanan ka xumahay.”
Sidoo kale, Xildhibaan Maxamed Axmed Obsiiye ayaa sheegay in Qolalka la sheegay in la iibiyay ee Dugsiga Sheekh Bashiir ee Magaalada Hargeysa uu yahay Qolkii Macallimiinta iyo kii Maamulaha Dugsiga. Waxaanu naqdiyay sharciyadda Xukuumaddda M/weyne Rayaale. “Sharciyaddii maantaa ugu dambaysa oo haddaan la saxeexin, Sharciyadda Rayaale iyo Xukuumaddiisa Calaamad-su’aal baa saaran. Xisbiyada Mucaaradkuna waxay taagan yihiin mawqifkoodii hore ee ahayd in aanay aqoonsanayn..Golaha Wakiiladu wuxuu go’aan ka soo saaray in Xukuumaddu Rasaasta nool u adeegsato Shacabka, balse way iska indho tirtay..Waa la iibiyay labadaa qof oo waa naloo caddeeyay..Waxaan leeyahay, Xisbiga UDUB ee Xukuumadda hoggaamiya umadda ha kala xishoodo arrimahan.” Ayuu yidhi Xil. Obsiiye.
Intaa ka dib, waxa Mudanayaasha la waydiiyay su’aalo laba ka mid ah iyo jawaabihii ay ka bixiyeen ay dhaceen sidan;
S: Hadda ma cusba arrintan oo hore ayaa loo hadal hayay, una jireen Guryo la sheegay in ay Xukuumaddu iibisay, maxaad hore uga hadli waydeen?
J: Xil. Obsiiye: Waxaanu uga hadli waynay, Xukuumadda iyo Golaha Wakiilada wada-shaqayn baa ka dhaxaysa, balse waxa aanu ka hadalnay markii aanu ogaanay in Dugsiyada ay marayso. Iyaga (Xukuumadda) ayaanu Warbixin ka doonaynaa oo aanu sugaynay, hase ahaatee, waxaanu aragnaa in Wasiiradu ka hadleen oo ay ka xog-bixiyeen. .Waxaanu lahayn yaanay Xukuumaddu odhan doorkayagii ayaa farogelin lagu hayaa. markaa markii Saxaafaddu soo bandhigtay, Ardaydii soo baxeen, ayaanu doorkayagii qaadanay.
S: Maxaa idiinka meel yaala go’aannada aan la fulin ee aad soo saartaan?
J: Xil. Rayte: ..Haddaanu go’aan soo saarno oo ay Xukuumaddu meel isaga tuurto, awood kale ma lihin oo Askartayadu waa Shacabka oo inay soo baxaan ay ahayd.